Malunga nathi -Wuxi New Diesel Power Machinery Co., Ltd.
I-Wuxi New Diesel Power Machinery Co., Ltd. igxile ekuboneleleni ngeyona turbocharger esemgangathweni kunye neenxalenye ze-turbo endaweni yentengiso kunye nokusebenza. I-ofisi eyintloko, imveliso kunye nelayini zemigca zibekwe ngokufanelekileyo eWuxi ukusuka apho kukho ukufikelela ngokulula kumazibuko eShanghai naseNingbo.
Ulawulo lomgangatho wobunzululwazi obungqongqo
Ixesha lokuhanjiswa ngokukhawuleza
Inzondelelo kunye nenkonzo yabathengi ebukhali
Icandelo lezemveliso libandakanya: i-CNC kunye nokusila okusetyenziswa ngesandla, i-CNC kunye ne-lathes yesandla, iziko le-5-axis machining, oomatshini beScalck Balance, i-arc welding, i-tig welding, i-mig welding, uvavanyo lwe-NDT, ukunyanga ubushushu kunye noxinzelelo, uhlolo, ulinganiso kunye nokulinganisa ngokuchanekileyo.
INewry Turbo ibonelela ngeentlobo ngeentlobo zeemveliso kuHola wendlela, kuShishino, kuThutho loRhwebo, eLwandle, kwiTraki yokuKhanya kunye nokufakwa kwezithuthi zeDiesel / zeRhasi kwihlabathi liphela. Iimveliso zethu kubandakanya i-turbocharger epheleleyo, i-cartridge (i-CHRA), ivili le-compressor, i-shaft ye-turbine (i-shaft kunye ne-assy yevili.), Izindlu ze-turbine, i-compressor yezindlu, i-VNT / i-VGT iringi yombhobho, ikhaka lobushushu, indawo yokuhlala, i-actuator kunye neekiti zokulungisa.
Ii-turbos ezintsha zenziwe kwimigangatho ekhethekileyo, hayi kuphela ukuhambisa iimfuno zabanini bamandla, kodwa kunye nokugcina iinjini zisebenza ngokufanelekileyo.
Ngokubonelela ngomgangatho ophezulu, iimveliso kunye neenkonzo ezingabizi mali ininzi, iNewryturbos iphumelele igama elihle eYurophu, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma, mpuma mpuma kweAsia nakwamanye amazwe.
I-Newry turbo stocks ezinentlobo ngeentlobo ze-turbo kunye nezahlulo, ijolise ekumiseni ukuhanjiswa okusebenzayo emva kwe -markmarket kwihlabathi liphela. Ayisiyiyo kuphela abathengi abathe ngqo abadlala indima ephambili, kodwa nabasebenzisi babo babalulekile kuwo omabini la macandelo. Singumlingane oqeqeshiweyo nothembekileyo. Konke ngenzuzo yomsebenzisi wokugqibela.INew turbo yamkela ishishini elitsha kwihlabathi liphela kwaye ndiyabulela kubasasazi abakhuthazayo.